Fahatsiarovana ny 29 marsa 47 : fampielezan-kevitra politikan’ny mpitondra ny hetsika | NewsMada
Tamin’ity, amin’izao ankatoky ny fifidianana izao, lohahevitry ny hetsika ny hoe: “Tolom-panafahana 1947: Firaisankina ho fisandratan’i Madagasikara”. Tsy inona fa ny fandresen-dahatry ny mpitondra amin’ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena.
“Fanoherana bontolo hatrany sy fanakorontanna hatrany ve no mbola hanakanana ny fisandratana eto amin’ity firenena ity?Hiroso hatrany amin’ny fisandratana isika… Hahazoantsika mijery lavitra amin’ny fampandrosoana ny firenena ny vina fisandratana”, hoy, ohatra, ny kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina tany Moramanga, afakomaly.
Miantso ny vahoaka malagasy hitodika ho amin’ny firenena izy. “Andao hiara-misalahy sy hiray hina hanandratra ny firenentsika”, hoy izy. Nilaza hitondra fampandrosoan ara-toekarena ho an’ny firenena izy ao anatin’ny vina fisandratana. Ny zava-dehibe amin’izany ny fisandratan’ny toe-tsaina enti-miatrika ny fampandrosoana ny firenena.